पर्यटकीय गतिविधि देशैभर खुले
सोमबार १९ आश्विन, २०७७ विचारवाटिका 1528
असोज १९, काठमाडौं । ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि ठप्प पर्यटकीय गतिविधि समेत सरकारले आन्तरिक हवाई उडान र अन्तरजिल्ला यातायात खुला गरेसँगै देशभर आवतजावत बढ्न थालेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सीइओ धनन्जय रेग्मीका अनुसार १ असोजपछि देशैभर आन्तरिक पर्यटनका धेरैजसो गतिविधि सुचारु भएका छन् ।
घुमफिरका प्याकेजको तयारी र बिक्रीमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु लागेका छन् । यसबीचमा सगरमाथा आधार शिविरसम्मको पदयात्रा, पोखरा र रारा तालका गन्तब्यमा नेपालीहरुको चासो बढी देखिएको छ ।
सुरुमा त व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरु नै घुमफिर गरेर पर्यटकीय माहोल बढाउने प्रयास भइरहेको छ । ‘आफैं सर्वप्रथम फिल्डमा गएर अनुभव गरेपछि मात्र आफ्ना पाहुनालाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ,’ सीइओ रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसकारण पर्यटन व्यवसायीलाई नै घुमघाममा प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’
सरकारले पर्वतारोहण र पदयात्रा खुला गरेसँगै यससँग सम्बन्धित गतिविधि बढेको जानकारी छ । अहिले बहराइनका १८ जनाको टोली सगरमाथा क्षेत्रमा छ । बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीले लोबुचे हिमाल चढिसकेको छ । त्यसपछि उनीहरु मनास्लु हिमाल आरोहणमा जाने छन् ।
एक टोलीले यो सिजन हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएको पर्यटन विभागले बताउँछ । तर पदयात्राका लागि भने विदेशबाट पर्यटक आइसकेका छैनन् । व्यवसायी बताउँछन् नेपालीहरुको चासो भने बढेको छ । घुमफिरका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याएको यती एअरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रका लागि धेरै नेपालीले दशैंमा घुमफिरको योजनासहित प्याकेज बुक गरिसकेका छन् । दोस्रो आकर्षण मुगुको रारामा देखिएको छ । तेस्रोमा कास्कीको घान्दु्रक यात्राका लागि नेपालीको बढी बुकिङ आइरहेको छ ।
देशभरका मुख्य पर्यटकीय गन्तब्यका होटेल खुलेको होटेल संघ नेपाल(हान)ले बताउँछ । संघका सदस्य युवराज श्रेष्ठ बताउँछन, देशभर क्वारेन्टिन भनि तोकिएका बाहेक अन्य होटेल पनि खुलेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल खुल्यो भन्ने सन्देश दिन मात्र होटेल खुलेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, पाहुना भने छँदै छैनन् ।’
हानको अनुसार ठूला शहरबाट नजिकै रहेका गन्तब्यमा शुक्रबार र शनिबार पाहुना बढेको छ । चन्द्रागिरि रिसोर्टसहित काठमाडौं नजिकका रिसोर्ट, धुलिखेल, सौराह र पोखरामा आन्तरिक पर्यटक बढिसकेका छन् ।
नेपालको मुख्य पर्यटकीय गन्तब्य पोखरामा २ असोजबाट सम्पूर्ण पर्यटकीय गतिविधि सुचारु भएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरा च्याप्टरले बताए । यसमा सबैभन्दा आकर्षक प्रडक्ट प्याराग्लाइडिङ बनेको छ ।
नेपाल एशोसिएशन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)ले १ अक्टोवरबाट देशभरका नदीमा जलयात्रा खोल्ने निर्णय गरेको छ । नाराका अध्यक्ष गंगा प्रसाद नेपाल बताउँछन्, आफ्नो समूह बनाएर पर्यटक जलयात्रामा जान चाहेमा त्यसको प्रवन्ध गरिने छ ।
उनले बताए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट चासो राखेर सोधखोज शुरु भएकोले यो निर्णय गरेको हो । कोरोनापछि कुनै टोली नदीमा जलयात्राका लागि भने गइसकेको छैन । नेपालमा जलयात्राको मौसमसमेत भर्खरै प्रारम्भ भएको छ ।
जीपलाइनमा रमाउन चाहनेका लागि पनि धुलिखेलमा उत्साहजनक खबर छ । कम्पनीले पूर्ण सुरक्षा प्रवन्ध गरेर शनिबारबाट सेवा प्रारम्भ गरेको जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका सीइओ रेग्मी बताउँछन, महामारीका बेला जहाँ सहज छ, त्यहीँबाट यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । दुर्गमका गन्तब्यमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव छ । सबैतिर सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुनेमा पनि पर्यटक ढुक्क हुनसक्ने वातावरण भने छैन ।
???????? ??????? ?????? ???? bekfqicdtp http://www.ga2r4kg165i2s9x35q6goxy853v6l03ws.org/ [url=http://www.ga2r4kg165i2s9x35q6goxy853v6l03ws.org/]ubekfqicdtp[/url] abekfqicdtp
कोभीड–१९को महामारीबीच पनि खुले विद्यालय